Momba anay - Jiangxi Alutile Building Materials Co., Ltd.
Jiangxi Alutile Building Materials Co., Ltd. dia orinasa mitambatra izay mihazakazaka mifanaraka amin'ny takiana sy ny fitsipika ho an'ny orinasa voatanisa, ny orinasa mitazona azy dia HONGTAI GROUP. Amin'ny maha iray amin'ireo orinasa voalohany manamboatra tontonana vita amin'ny aliminioma ao Shina, dia nifantoka tamin'ny fikarohana, fanamboarana, varotra ary serivisy tamin'ny rafitra rindrina vy nandritra ny 20 taona i Alutile. ALUTILE mihazona ny zon'ny fananana ara-tsaina mahaleo tena feno ho an'ny vokatra maro.
Miaraka amin'ny traikefa mihoatra ny 20 taona amin'ny famokarana takelaka misy rindrina sy rindrambaiko momba ny fanavaozana ny tontolo iainana sy ny fampiharana, dia nanokan-tena tamin'ny fanomezana vokatra avo lenta ho an'ny mpanjifa izahay. Ny vokatrao lehibe indrindra dia misy ny Panel Composite Aluminium, ny tontolon'ny Core Core rehetra (tontonana 3A), ny tontonana aluminium matevina, ny tontolon'ny sandwich insulated thermaly, ny tontolon'ny haingon-trano momba ny tontolo iainana, ny lakaoly misy tombo-kase silika sns.
Amin'ny maha-siansa fototra ny fampandrosoana ny siansa sy ny fikarohana ao amin'ny Minisiteran'ny fananganana China, ny orinasanay dia manome lanja betsaka ny siansa sy ny teknolojia ary ny fifehezana kalitao henjana. Ny akora rehetra sy ny vokatra vita dia voasedra mafy amin'ny alàlan'ny fitaovana mandroso nafarana avy any Amerika, Alemana ary Japon.
Maherin'ny 20 taona ny Mazava ho azy fa sarotra, ALUTILE novolavola ary nitombo tamin'ny fikarohana sy ny fampiharana tsikelikely, ireo fitaovana vita amin'ny lambam-baravarankely dia amidy firenena sy faritra maherin'ny 100 manerana an'izao tontolo izao, lasa orinasa manan-kery indrindra amin'ny indostria.
Orinasa talen'ny solombavambahoakan'ny tontonana vita amin'ny aliminioma ao amin'ny Association Building Materials China
Iray amin'ireo mpamolavola ny fenitra nasionaly ho an'ny tontonana plastika vita amin'ny plastika.
Toeram-piofanana fitantanana kalitao amin'ny indostrian'ny fitaovana plastika vita amin'ny alimina ao Shina
Fikarohana momba ny siansa sy ny teknolojia ary ny fotodrafitrasa fampandrosoana ny Ministeran'ny siansa sy ny teknolojia Fikarohana momba ny haitao
Orinasa teknolojia avo lenta an'ny National Torch Program
Orinasa naoty nasionaly momba ny hetra nasionaly